NDA & Ilaalinta Xuquuqda-Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Qaybaha Joogtada ah
Waxsoo Dhamaad (PCBA + sanduuqa dhis)
PCBA + sanduuqa biraha
Ganacsiga Mark & ​​Diiwaangelinta Patent-ka ee Shiinaha
Fumax ahaan, waxaan fahamsanahay inay muhiim tahay in qaabeynta macaamiisha loo xafido sir. Fumax waxay hubinaysaa in shaqaaluhu aysan shaacin doonin wax dukumiinti naqshadeyn ah cid seddexaad mooyee ogolaansho qoraal ah oo macaamiisha ah
Bilowga wadashaqeynta, waxaan u saxiixi doonnaa NDA macmiil kasta. Muunad NDA caadi ah sida hoos ku xusan:
HESHIISKA AAN SHAQAALAHA LAHAYN
Heshiiskan Wada-Bixinta Aan-Bixinta ("Heshiiska") ayaa la sameeyay oo lagu galay DDMMYY, oo u dhexeeya iyo:
Fumax Technology Co., Ltd. Shirkad / Shirkad 'CHINA' ("XXX"), oo leh meheradeeda ganacsi oo ku taal 27-05 #, East block, YiHai square, Chuangye Road, Nanshan, Shenzhen, China 518054,
Macaamiil Shirkady, oo leh meheraddeeda ugu muhiimsan ee ganacsiga oo ku taal 1609 av.
halkan wixii ka dambeeya ee hoos ku xusan heshiiskan oo loo yaqaan 'Xisbi' ama 'Xisbiyo'. Ansaxnimada dokumentigan waa 5 sano laga bilaabo taariikhda saxiixa.
Halka, Dhinacyadu ay ku talo jiraan inay sahamiyaan fursadaha ganacsi ee wadajirka ah, iyada oo lala xiriirinayo, ay isu muujin karaan midba midka kale macluumaad sir ah ama lahaansho.
HADA, SIDEED, Xisbiyadu halkan waxay ku heshiiyeen sida soo socota:
QODOBKA I - MACLUUMAAD KU SAABSAN
Ujeeddooyinka Heshiiskan, “Macluumaadka Lahaanshaha” waxaa loola jeedaa macluumaad qoran, dukumenti ama hadal ah nooc kasta oo ay labada dhinac u soo bandhigeen oo ay ku sifeynayaan kooxda siideynta halyeeyo, shaabad, calaamado ama calaamado kale oo tilmaamaya astaanteeda lahaansho ama qarsoodi , oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, (a) macluumaadka ganacsiga, qorsheynta, suuqgeynta ama dabeecadda farsamada, (b) moodooyinka, qalabka, qalabka iyo softiweerka, iyo (c) wixii dukumiintiyo ah, warbixinno, xusuus-qor ah, qoraallo ah, feylal ama falanqeyn waxaa soo diyaariyay ama matalaya Xisbiga qaata ee ka kooban, soo koobaya ama ku saleysan mid ka mid ah waxyaabaha aan soo sheegnay. “Macluumaadka lahaanshaha” kuma jiri doono macluumaad:
(a) waxaa si guud loo heli karaa kahor taariikhda Heshiiskan;
(b) si rasmi ah loo heli karo wixii ka dambeeya taariikhda Heshiiskan iyada oo aan loo marin ficil khaldan ee Kooxda qaata;
(c) waxaa siinaya kuwa kale kooxda siideynta iyadoon xayiraad la mid ah laga saarin xaquuqdooda inay adeegsadaan ama shaaciyaan;
(d) ay si xaq ah u garaneyso Xisbiga qaata iyadoon wax xayiraad ah la saareynin lahaanshaha waqtiga ay ka hesho macluumaadka noocaas ah kooxda siideynta ama ay si sax ah u garaneyso kooxda heleysa iyadoon xayiraad lahaansho lahaansho laga helin ilo aan aheyn kooxda shaacinta;
(e) waxaa si madaxbanaan u horumariyey Xisbiga qaabilaya dad aan fursad u helin, si toos ah iyo si dadbanba, macluumaadka lahaanshaha; ama
(f) waxay ku qasban tahay in lagu soo saaro amar maxkamadeed oo awood sharciyeed leh ama amar maxkamadeed oo sharci ah ama maxkamadeed, iyada oo la oggol yahay in kooxda heleysa ay si dhakhso leh ugu wargalinayso kooxda shaacineysa dhacdadaas si kooxda shaacintu u raadsato amar ku habboon oo ilaalin ah.
Ujeedada ka reeban ee kor ku xusan, shaacinta oo gaar ah, tusaale ahaan injineernimada iyo qaabeynta farsamooyinka iyo farsamooyinka, alaabada, softiweerka, adeegyada, cabbirada hawlgalka, iwm looma qaadan doono inay ku jiraan ka reebitaannada kor ku xusan kaliya sababtoo ah waxay qaateen shaacinta guud ee ku jirta qaybta dadweynaha ama lahaanshaha Qaataha. Intaas waxaa sii dheer, isku darka astaamaha looma qaadan doono inay ka mid yihiin waxyaabaha ka reeban kor ku xusan kaliya sababtoo ah astaamaha shaqsiyeed waxay ku yaalliin barta dadweynaha ama heysato qaataha, laakiin waa keliya haddii isku darka laftiisa iyo mabda 'u ah howlgalka ay ku jiraan dadweynaha lahaanshaha ama lahaanshaha Xisbiga soo dhoweynta.
QODOBKA II - QARSOODIGA
(a) Xisbiga qaata waa inuu ilaaliyaa dhammaan macluumaadka la siinayo ee Macluumaadka Lahaanshaha sida qarsoodi iyo macluumaad lahaansho iyo, marka laga reebo ogolaanshaha hore ee qoraal ee kooxda siideynta ama haddii kale si gaar ah halkan ku xusan, ma ahan inuu shaaca ka qaado, nuqulo ama u qeybiyo macluumaadkaas lahaanshaha shaqsi kasta oo kale, shirkad ama hay'ad muddo shan (5) sano ah laga bilaabo taariikhda shaacinta.
(b) Marka laga reebo wixii la xidhiidha mashruuc kasta oo wada jir ah oo u dhexeeya Dhinacyada, Xisbiga qaata waa in aanu u adeegsan wax siidaynta Macluumaadka Hantida ee Xisbiga faa iidadiisa gaarka ah ama manfaca qof kale, shirkad ama hay'ad; si hubaal ah oo dheeri ah, buuxinta codsi patent ah oo hoos imanaya shuruucda waddan kasta ee Xisbiyada qaata ee ku saleysan, si toos ah ama si dadban, ee ku saabsan bixinta macluumaadka lahaanshaha ee Xisbiga ayaa si adag loo mamnuucayaa, iyo haddii dalab noocan oo kale ah ama diiwaangelin shati ay ku dhacdo xadgudub Heshiiskan, dhammaan xuquuqda dhinacyada soo dhoweynaya ee ku saabsan arjiga patent-ka ama diiwaangelinta patent-ka waa in gabi ahaanba loo gudbiyaa Xisbiga siideynta, iyada oo aan wax kharash ah laga qaadin kan dambe, iyo marka lagu daro wixii kale ee lagu heli karo waxyeelo.
(c) Kooxda qaabilaysa ma siidaynayso dhammaan ama qayb kasta oo ka mid ah bixinta macluumaadka lahaanshaha ee Xisbiga cid kasta oo la shaqeysa, wakiilo, saraakiil, agaasimayaal, shaqaale ama wakiillo (si wada jir ah, "Wakiillo") ah kooxda soo dhoweynta ah marka laga reebo baahida loo qabo- ogow aasaaska. Xisbiga qaata wuxuu ogolaaday inuu u sheego mid ka mid ah Wakiiladiisa qaata bixinta macluumaadka lahaanshaha ee Xisbiga si qarsoodi ah iyo lahaansho nooca ay tahay iyo waajibaadka Wakiilka ee la xiriira dayactirka Macluumaadka Ganacsi ee noocaas ah iyadoo la waafajinayo shuruudaha Heshiiskan.
(d) Kooxda qaabilaysa waa inay adeegsataa isla heerka daryeelka si ay u ilaaliso sir ahaanta macluumaadka lahaanshaha ee loo soo bandhigo iyada oo ay u isticmaalayso inay ku ilaaliso Macluumaadkeeda Gaarka ah, laakiin dhammaan dhacdooyinka waa inay ugu yaraan u isticmaalaan heer macquul ah oo daryeel ah. Xisbi kastaa wuxuu u taagan yahay in daryeelka noocan oo kale ahi uu siinayo difaac ku filan macluumaadkiisa gaarka ah.
(e) Xisbiga qaata wuxuu isla markaaba kula talin doonaa kooxda siideynaysa qoraal qoraal kasta oo ah ku takrifal ama ku takrifal qof kasta oo ka mid ah oo bixinaya Macluumaadka Lahaanshaha Xisbiga ee ay qaabilayso kooxda wax heleysa.
(f) Dukumiinti kasta ama agab oo ay bixiyeen ama wakiil ka yihiin kooxda siideynta, iyo dhammaan macluumaadka kale ee lahaanshaha qaab kasta ha ahaadeene, oo ay kujiraan dukumiintiyada, warbixinnada, xusuusta, qoraalada, feylasha ama falanqaynta ay diyaariyeen ama ku matalayeen Xisbiga qaata, oo ay kujiraan dhamaan nuqulada agabyadaas oo kale ah, waa inay si dhaqso leh ugu soo celisaa kooxda qaabilaada kooxda siideynta kadib markay codsi qoraal ah ka hesho kooxda siideynta sabab kasta ha noqotee.
QODOBKA III - LAYSALO, DAMMAANO AMA XUQUUQ MA LEH
Ruqsad looma siin karo Xisbiga qaata wax kasta oo qarsoodi ganacsi ama shatiyado ah oo la siinayo ama lagu muujinayo gudbinta Macluumaadka lahaanshaha ama macluumaad kale oo loo dirayo Xisbigaas, midkoodna macluumaadka la gudbiyay ama la isweydaarsaday ma noqon doono wakiil, damaanad, dammaanad, dammaanad ama dhiirrigelin la xiriirta ku xadgudubka shatiyadaha ama xuquuqda kale ee dadka kale. Intaas waxaa sii dheer, bixinta macluumaadka lahaanshaha ee kooxda siideynta ma noqon doonto ama laguma darin wax matalaad ama damaanad qaad ah oo ku saabsan saxnaanta ama dhameystirka macluumaadkaas.
QODOBKA IV - SOO SAARKA SARE
Xisbi kasta oo qaata wuxuu qirayaa in Macluumaadka Lahaanshaha ee xisbiga siideynta uu udub dhexaad u yahay shaacinta ganacsiga Xisbiga isla markaana ay horumariyeen ama ay u sii daayeen Xisbiga qiime aad u weyn. Dhinac kasta oo qaata wuxuu sii qirayaa in waxyeeladu aysan noqon doonin wax daaweyn ugu filan jabinta heshiiskan ee soo dhaweynta Xisbiga ama Wakiiladeeda iyo in kooxda shaacisay ay heli karto amar ama ciqaab kale oo sinaan ah si loo daweeyo ama looga hortago wax jebin ama hanjabaad jabinta heshiiskan. Xisbiga qaabilaya ama wakiiladiisa midkood. Daaweynta noocan oo kale ah looma qaadan doono inay tahay daaweynta khaaska ah ee jebin kasta oo heshiiskan ah, laakiin waxay ahaan doontaa marka lagu daro dhammaan daawooyinka kale ee laga heli karo sharciga ama sinnaanta kooxda siideynta.
QODOBKA V - MALAHAN XAL
Marka laga reebo ogolaanshaha hore ee qolada kale, dhinacna, ama midkoodna wakiiladooda, ma codsan doonaan ama sababi doonaan in la dalbado shaqaale ka tirsan kooxda kale muddo shan (5) sano ah laga bilaabo taariikhda halkan. Ujeeddooyinka qoddobkan awgeed, weydiisashada kuma jiri doonto codsi shaqaale halka ay weydiisashadu tahay oo keliya iyada oo loo marayo xayeysiis xilliyada wareegga guud ama shirkad raadin shaqaale ah oo wakiil ka ah xisbi ama Wakiilladooda, illaa iyo inta xisbigu ama Wakiilladoodu aysan sameynin toos ama ku dhiirrigeli shirkadda raadinta noocaas ah inay codsato shaqaale si gaar ah loo magacaabay ama dhinaca kale.
QODOBKA VII - HALIS
(a) Heshiiskan wuxuu kakooban yahay isfahamka udhaxeeya Dhinacyada wuxuuna meesha ka saarayaa dhamaan fahamkii hore ee qoraalka iyo afka ahaa ee laxiriira mowduuca halkan ku xusan. Heshiiskan lama beddeli karo marka laga reebo heshiis qoraal ah oo ay saxiixeen labada dhinac.
(b) Dhismaha, fasiraadda iyo waxqabadka heshiiskan, iyo sidoo kale xiriirka sharci ee dhinacyada ee halkan ka dhasha, waxaa lagu maamuli doonaa laguna dhisi doonaa si waafaqsan sharciyada Kanada, iyada oo aan loo eegin xulashada ama isku dhaca qoddobada sharciga. .
(c) Waa la fahamsan yahay oo la isku raacay in guuldarro ama dib-u-dhac midkoodna dhinac ku dhaqmin wax kasta oo xaq ah, awood ama mudnaan leh halkan ku shaqeyn doonin ka-dhaafitaankeeda, sidoo kale midkood ama qayb jimicsi ah ka hor-istaagi mayso wax kale ama jimicsi dheeri ah, ama ku adeegso wixii xuquuq kale ah, awood ama mudnaan halkan ah. Ka dhaafida shuruudaha ama shuruudaha heshiiskan looma qaddarin doono inay tahay ka-dhaafitaan kasta oo jebinta xilli kasta ama xaalad kasta ah. Dhammaan ka-dhaafitaannada waa inay ahaadaan kuwo qoraal ah oo ay saxiixeen kooxda la doonayo in la xidho.
(d) Haddii qayb ka mid ah Heshiiskan loo qabto mid aan la fulin karin, inta ka hartay heshiiskan si kastaba ha noqotee waxay ku sii jiri doontaa xoog iyo dhaqan buuxa.
(e) Bixinta Macluumaadka Lahaanshaha ee halkan laguma sharxi karo inay ku qasbayso labada dhinac midkood (i) inuu galo heshiis kasta oo dheeraad ah ama gorgortan ama la yeesho wax kale oo shaaca looga qaadayo dhinaca kale halkan, (ii) inuu ka fogaado inuu galo wixii heshiis ama gorgortan ah oo lala galo qof kasta oo saddexaad oo ku saabsan isla mawduuca ama mawduuc kale, ama (iii) in laga waantoobo in la sii wado ganacsigeeda qaab kasta oo ay doorato; iyadoo la bixinayo, si kastaba ha noqotee, iyadoo lala xiriirinayo dabagalka dadaallada ku xusan cutubyada hoose (ii) iyo (iii), Kooxda qaabilaysa kuma xadgudbayso mid ka mid ah qodobbada Heshiiskan.
(f) Haddii aan si kale sharcigu u baahnayn, laguma dhawaaqi karo meel fagaare ah labada dhinac midkoodna ee ku saabsan Heshiiskan ama doodaha la xiriira iyada oo aan oggolaansho qoraal ah oo qoraal ah laga haysan Qaybta kale.
(g) Qodobbada Heshiiskan waxaa loogu danaynayaa dhinacyada halkan ku sugan iyo kuwa la oggolaaday ee beddelaya iyo kuwa loo xilsaaray, mana jirto cid saddexaad oo raadin karta inay fuliso, ama ka faa'iideysato, qodobbadaas.
Markhaatiga Marqaatiga ah, Dhinacyada halkan ku fuliyay Heshiiskan laga bilaabo taariikhda ugu horreysa ee kor ku qoran.